Umcimbi wokulahlekelwa ubuntombi unokuphathwa ngeendlela ezahlukeneyo. Kodwa simele sivume ukuba oku kubalulekile. Kwaye ndifuna yonke into ihambe kakuhle, inothando kunye nemiphumo emibi. Ukuze ugweme iinyembezi kunye neentlekele ezingadingekile, umntu akufanele akwazi ukunika ithuba lakhe lokulahla nje iimpembelelo zokomoya kunye nezilwanyana zezilwanyana. Isabelo sokunyaniseka okunempilo apha akulimazi. Amava okuqala ngokwesini ayifuni kuphela kwengqondo, kodwa neengxaki zonyango. Kufuneka bacingelwe kwangaphambili.
Iingcebiso zendalo yonke: ukuba iyothusayo, ke akudingeki. Lindela kude kube ngumnqweno omkhulu. Uloyiko luhlalutya:
A. Ukwesaba ukubonakala kungenamava. Enyanisweni, ukuba uneminyaka eyi-15-18 ubudala, ke akukho mntu okhethekileyo okulindele "amava". Ngokuchasene noko, ukwazi ukuba intombazana engenacala, indoda iya kuba yinyameko kwaye ilumkele. Kwiminyaka emva, amantombazana aqala ukuxininisa ngokukrakra, ayesaba (ngokuqhelekileyo anesizathu) sokuba ukungabi namacala kuya kubonwa ngumntu "njengento engenamsebenzi." Ewe, ungamkeli nto! Eyona nto ibalulekileyo kulo mzekelo kukuba kukhulise ixesha lokuthandana. Ukunciphisa ubuhlobo bakho bobulili ekunciphiseni (uvumela ukuba nayiphi na into yokumanga kunye ne-caresses, kodwa ngaphandle koqhagamshelwano lwezitho zangasese). Ngaloo ndlela, uya kuba nexesha lokufunda indoda yakho ngokubanzi, ukuqonda oko kukunika umdla. Uya "kufunda" oko kukunandipha. Kwaye ekugqibeleni ndagqiba ekubeni "uye kulala", ungagxininisi kulo "oku", uthathe i-petting eyaziwayo kunye neyokuzonwabisa. Emva koko yonke into iza kuxazululwa ngokwayo: isiza siya kusebenza. Kwaye ukulahleka okubuhlungu kubuntombi buqinisekiswa kuwe.
B. Ukwesaba ukushiywa. Ekuqaleni intombazana iyayika ukuba loo mfana uya kumshiya ukuba akafumani nto ayifunayo. Emva koko-ukuba uya kuyeka, kuba sele sele efumana yonke into ayifunayo. Oku kulungele ukwesaba. Kwaye ukuba ulwalamano lwakhiwe kulo, kungcono ukuba uziyeke (mhlawumbi luya kushiywa).
C. Ukwesaba intlungu. Siza kuthetha ngale nto ngezantsi.
Ubuhlungu kunye negazi.
Ngokwalo, ukwesaba kunokubangela ubuhlungu. Intombazana ngaphakathi "iikontraka", kukho i-spasm ye-muscle - kwaye yile nto eyenza uvakalelo olubuhlungu ngexesha lokwabelana ngesondo. Ukukhupha i-spasms, ukukhulula izihlunu kunye neentlongo zivame ukucetyiswa ukuba zilahle ubuntombi ebusweni obushushu. Kubonakala ukuba le ngcebiso yabhalwa kwiincwadi zezifundo zaseYurophu. Kwiindawo zokuhlambela eziqhelekileyo zokuveliswa kwekhaya, abathandana nabanomdla kuphela abanokulala ngesondo. Abaqalayo bafumana umngcipheko wokufumana ukulimala okongeziweyo. Kuya kubuhlungu kangakanani ukuhlaziya (ukuphuka kwe-hymen) kuxhomekeke kwiqabane. Kufuneka abe nolwazi olunzulu lokunxibelelana nawe, okanye nje ngamava amaninzi: emva koko, indoda ayifanele 'ukuphumula', kodwa nendlela yokuzonwabisa nomlingane. Ukwabelana ngesondo kuphela "kuya kufana ne-clockwork".
Ukubaluleka kokubaluleka okukhulu akunjalo, kodwa kwindlela yokujonga kwengqondo, kuya kuba lula ukuba intombazana ibe yinto engathandabuzekiyo, "umthunywa wevangeli" uvela (ngaphantsi, ejongene nomlingane).
Ukuba emva kokuqhagamshelana kokuqala ngesondo, intlungu ayidluli ixesha elide (ngaphezu kweveki), ukuba kungakapheli iintsuku ezintathu ukuphuma kwegazi kungavumi, kufuneka udibane nodokotela. Kwimeko nayiphi na imeko, de kube yinyamalala kunye nokuphahlazeka, ayikwacetyiswa ukuphinda izenzo zesondo.
Musa ukulinda iveki epheleleyo ukuba intlungu inzima kakhulu okanye ihamba kunye nomkhuhlane. Ngokukodwa xa kukho intlungu kwisisu esisezantsi. Emva kwakho konke, nokuba ngowokuqala kunye nendoda ethandekayo ingaphenduka. Mhlawumbi u suleleke.
Iikhondom kunye neepilisi.
Ikhondom yinto ekhuselekileyo yokukhusela isifo. Amagqirha adibanisa iikhondom. Abafana abazi ukuba banxibe njani, kodwa bayesaba ukuyivuma. Amantombazana, ngenxa yezizathu ezithile, ayesaba ukuba ikhondom izakukhusela abantu ukuba bahlukane okanye bavelele.
Kuyahluke! Iikhondom zithintela intlungu ngenxa yokuba zambethe i-lubricant ekhethekileyo ekhuthaza ukuhamba. Ukuhlaziywa, abaphazamisi, kuba kule nkqubo ayibalulekanga ikhondom ngokwalo, kodwa isigxina esasigqoke kuso.
Ukunyamekela kufuneka kuthatyathwe nokuba ngaba babini abalingani abangenacala. Ukuzithemba komnye nomnye kungabandakanyi umngcipheko wokubamba izifo ezithathelwa ngesondo. Kodwa akuyi kukukusindisa ekukhulelweni. Into efanelekileyo ukuyenza kule meko kukuba uthathe i-contraceptive ye-hormone ehlangeneyo kakuhle ngaphambili.
Khumbula ukuba ugqirha kufuneka ukhethe ipilisi! Xa unikwe imali oyifunayo ukususela ngomhla wokuqala wokuya esikhathini, emva kweentsuku ezilishumi ungathi "yee" kumntu wakho. Ukuba iipilisi kufuneka zithathwe ukususela ngosuku lwesihlanu, ngoko "uthando" kufuneka ulinde malunga neenyanga - kude kube ngumjikelezo wesibini olandelayo. Kungcono ukuhamba yonke indlela ukuya ekupheleni, nokuba ngaba ngelo xesha uchithekile, kwaye kwakungekho buhlobo besondo. Ukuba uphazamisa ngenxa yezizathu ezifanelekileyo zokuthabatha iipilisi, emva kweentsuku ezimbini okanye ezintathu nje, ukuhamba esikhathini esingenakulungiswa kuya kuqala.
Ukuba awuzange uxabane, kodwa nje wanquma ukulibazisa "iintlanganiso ezithandanayo" ixesha elithile - ungaqalisa ukulayishwa okulandelayo kwexesha lokubeleka ngokwexesha ngokwemiyalelo. Akuyingozi.
Inobungozi yinto ebizwa ngokuba yi-postcoital, okanye "imoto" yokuzala. Nangona kunjalo kungendawo okubi kunokukhupha isisu. Ezi macwecwe (njengomthetho, zinokufumaneka kuphela kumgqirha, kwii-pharmacy kuphela "i-postinor" ithengiswa) iqukethe iqondo eliphezulu kakhulu lama hormone kwaye linokukhokelela ekusebenziseni ama-ovari.
Njengomlilo wokutshatyalaliswa komzimba, ungasebenzisa izithintelo zokuzalela eziqhelekileyo ngokwecebo elilandelayo:
Thatha ngokukhawuleza iipilisi ezimbini zeDemulen, iRigevidona okanye i-Triziston. Iipilisi ezine zeMarvelona, ​​iMersilon okanye i-Femodena.
Emva kweeyure eziyi-12, phinda umlinganiselo ofanayo. Musa ukwenza ngaphandle kweeyure ezingama-72 emva kokulala kwesondo esingakhuselekanga.
Ukuya esikhathini kufuneka kuqale ngexesha okanye kwangoko. Xa kunokulibaziseka okungenani umhla o-1, nceda uqhagamshelane nogqirha - mhlawumbi ukuba ukhulelwe.
Ukutya rhoqo kunye nokuchaneka kokukhulelwa kwezinto ezincinci kuqinisekisa ukukhuseleka kwe-100%.
Kwamaxesha aseSoviet, ubudala obuqala ngayo umsebenzi wesondo buchazwe ngokucacileyo: ukusuka kwiminyaka eyi-18 ubudala kunokwenzeka ukutshata, oko kukuthi, ukususela kwiminyaka eyi-18 unokuqalisa ukulala ngesondo. Eli nani alifanelekanga kuphela ekuziphatheni, kodwa nakwiimeko zonyango.
I-hymen yinto eyenziwa ngama-anatomiki eyenza umsebenzi okhuselekileyo. Iimilliyoni zeeminyaka abafazi baye bahlaziywa kwaye, nangona kunjalo, kwinkqubo yokuziphendukela kwemvelo kunye ne-atrophied. Kukhohlakele ukucinga ukuba ulondolozo lwendalo lugcina kuphela ukuba loo mntu azibuze: "Ingaba ngowokuqala okanye awungowokuqala?" I-hymen iyintambo engokwemvelo kwiintsholongwane xa i-microflora ekhuselekileyo kwisiswini ayizange iqulunqwe ngokupheleleyo. Ukongezelela, amantombazana anesifo se-epithelium esincinci kakhulu ezindongeni zesisu. Iyakwazi ukuxhatshazwa kalula kwi-mechanical friction ngexesha lokulala. Iziphumo zingakhokelela ekuphuhlisweni kweenkqubo ezivuthayo, ekuchaseni kuzo izidumbu ze-hormonal, kunye nokuxhaswa kwamalungu angaphakathi, kunye nokungazinzi.
Okumangalisa ngokwaneleyo, enye into eyingozi kakhulu - ukuqala ngokukhawuleza kokusebenza ngokwesondo - ayinayo imiphumo eyingozi. Kukho imeko ezininzi apho abafazi baphulukana nobuntombi babo eneminyaka engama-27, 30, 36, bakhulelwa baza bazala ngokukhuselekileyo. Iingxaki zinokuvela ngenxa yokuba iintombi ezinqabileyo azivakalisi i-gynecologist, ngaphandle kokubona kubalulekile. Oku kubi. Uviwo lokukhusela kufuneka luyenze ubuncinane kanye ngonyaka.
Iingcebiso zesondo ezifanelekileyo kunabo bonke
Indlela yokwaneliseka ngesondo: i-masturbation
Ndingayithanda njani indoda emva kwesondo?
UMcDonald uya kugqoka ama-dandies kwi-hamburgers
Iiphosiso eziqhelekileyo ekusebenziseni izimonyo
Ukutya kwe-ABC - ukulahleka komzimba
Ubomi bukaNaomi Campbell eRashiya
Umfazi oyinyani - ngubani na?
Kwiholide phesheya kunye nosana
Indlela yokukhetha isinyani esilungileyo seenwele